कुन मानिसमा कति प्रतिभा रहेको छ, कस्तो आनिबानी छ र के–कस्ता विषयहरूमा रुचि छन् ? यी सबै कुरा थाहा पाउन त्यस्ता मानिससँग गहिरो मित्रता र संगतको आवश्यकता पर्दछ । बाह्य रूपमा नियालेर मानिसको प्रतिभा पहिचान गर्न सकिँदैन । त्यसमा निम्ति उनीहरूसँग घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध विस्तार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरेले आफ्नो जीवनयात्रामा संगत गरेका मुलुकका ३७ जना स्रष्टाहरूसँग जोडिएका संस्मरण–अनुभूतिलाई ‘अनुहार र अनुभूति’ नामक कृतिमार्फत छर्लङ्ग पार्न चाहेका छन् । जन्मथलो रामेछाप भए पनि सानैदेखि काठमाडौंकै परिवेशमा हुर्किएका घिमिरेले नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिका धुरन्धर विद्वान्–लेखकहरूसँग उठबस गर्ने औसर पाए । तिनै स्रष्टाहरूसँग संगत बाक्लिँदै जाँदा उनले २०१८ सालदेखि साहित्यिक द्वैमासिक ‘रचना’ प्रकाशन गर्न थाले । ‘रचना’ प्रकाशनमा हात हालेपछि तत्कालीन समयका चर्चित स्रष्टाहरूसँग उनको उठबसले व्यापकता पायो । घिमिरेले आफूसँग निकट रहेका स्रष्टाहरूसँगको नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्ध र घटनाक्रमहरूलाई उन्ने काम सो कृतिमा गरेका छन् ।
नाट्य–सम्राट बालकृष्ण समको उचाइ नेपाली साहित्यमा निकै उच्च छ । तर, आफ्नो जीवनकालमा समले अपमानका घुट्काहरू पिउनुपरेको तथ्य उनले सतहमा ल्याएका छन् । खासगरी, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुँदा समभन्दा कनिष्ठलाई माथिल्लो पद दिएका र उनलाई तल्लो पदमा सीमित राखिएकोमा घिमिरेको चित्त बुझेको देखिँदैन । उनी लेख्छन्, ‘केदारमान व्यथितको कुलपतित्व भएको नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बालकृष्ण सम उपकुलपति बन्नुभयो । यसअघि पनि बालचन्द्र शर्मा उपकुलपति भएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समलाई प्रज्ञा सदस्यका रूपमा राखिएको थियो । योगदान र स्तरका हिसाबले पनि यो अमिल्दो मनोनयन लाग्थ्यो । आफूमाथिका दुवै हाकिमबाट बेलाबेला समले अमर्यादित व्यवहार बेहोर्नुपरेको कुरा सुन्ने गरिन्थ्यो ।’
समसँगै उनले वासुदेव लुइँटेल, मदनमणि दीक्षित, कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेल, धुस्वाँ सायमि, रमेश विकल, भैरव अर्याल, बालमुकुन्ददेव पाण्डे, आनन्ददेव भट्ट, अच्युतरमण अधिकारी, विजय मल्ल, क्षेत्रप्रताप अधिकारी, देवकुमारी थापा, गणेशबहादुर प्रसाई, जगदिश घिमिरे, जनकलाल शर्मा, माधवलाल कर्माचार्य, रमेश गोर्खाली, शेषराज शिवाकोटी, नयराज पन्त, नारायणबहादुर सिंह, हर्षबहादुर बुढामगर, राजेश्वर देवकोटा, मनु ब्राजाकी, डा. धीरेन्द्रलगायतसँग जोडिएका संस्मरणलाई उतारेका छन् । प्रख्यात नाटककार विजय मल्लसँग त घिमिरेको झनै घनिष्ठता रह्यो । उनी लेख्छन्, ‘विजय अनौठो स्वभावका थिए । भेट भयो कि उनी भन्थे, चुरोट खुवाऊ न, चिया खुवाऊ न, सोडा खुवाऊ न, कफी खुवाऊ न, बियर खुवाऊ न ।’ उनको यस्तो प्रकारको बानी नै परेको थियो हामीलाई । होटलमा चिया खान गएपछि उनी आफ्नो कथा, उपन्यास अथवा नाटकको प्लट बडो नाटकीय तालले हाउभाउ लगाएर सुनाउँथे । सुनाउँदासुनाउँदै टक्क अडिएर स्रोताको आँखामा एकनाससँग घुरेर हेर्थे र फेरि सुरु गर्थे ।’
मूलतः घिमिरेको यो संस्मरण सँगालोले नेपाली भाषा, साहित्यमा क्रियाशील अघिल्लो पुस्ताका स्रष्टाहरूका बानीबेहोरा र उनीहरूका क्रियाकलापका अंशहरू बुझ्न यथेष्ट मद्दत पु¥याउनेमा कुनै शंका छैन । ‘अनुहार र अनुभूति’ पठनीय कृति बन्न पुगेको छ ।
कृति ः अनुहार र अनुभूति
लेखक ः रोचक घिमिरे
प्रकाशक ः बुकआर्ट नेपाल